'जेजे हुनु छ हुन्छ यहाँ पर्दा पछाडि नै'
काठमाडौं । पर्दामा छाएर सेलिब्रटी बन्नु धेरैको सपना हुन्छ । अनि त्यही सपना पछ्याउँदै कतिपय पर्दामा झुल्किन सफल हुन्छन् कतिपयले बीचैमा सपना त्यागिदिन्छन् । पर्दामा देखिन सफल कलाकारहरुले समेत सबैलाई रिझाएका हुँदैनन् । थुप्रै सम्झौतमा बाँधिएका हुन्छन् ।
सिनेमा निर्देशक र कलाकारबीच बढेका विवादले यस्तै देखाउँछ । यसको पछिल्लो पात्र हुन्, नायिका सुमिना घिमिरे । तीव्र यौन चाहना भएकी महिलाको भूमिकामा देखिन लागेकी नायिका घिमिरे र निर्देशक शंकर आचार्यबीच द्धन्द्ध बढेको छ ।
घिमिरेले ढाँटेर चलचित्रको प्रचारमा साथ नदिएको भन्दै आचार्यले पत्रकार सम्मेलन गरी विवाद छताछुल्ल पारिदिए । यद्यपि सुमिनाले भने आफू नयाँ सिनेमाका लागि काम गर्नुपर्ने हुँदा प्रचारमा जान नपाएको खबर निर्देकलाई गराएको दाबी गर्छिन् ।
निर्देशक र नायिकाबीच अधिकांश विवादको विषय भने यौन सिनका लागि भएको देखिन्छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै आधा दर्जन नायिकाहरुले निर्देशकले चाहेको उत्तेजक सिन दिन नमान्दा आफूहरु फिल्मबाट बाहिरिदुनपरेको दाबी गरेका छन् । नायिकाहरु सुष्मिता शाही, सुष्मा कार्की, शाभिता खड्काको निर्देशकसँग यस्तै विषयमा विवाद परेको थियो ।
निर्देशकले चाहेजस्तो उत्तेजक सिन दिन तयार नभएपछि नव नायिका सुष्मिता शाही 'बनाना' फिल्मबाट फालिएकी थिइन् । अहिलेको जमानामा 'एक्सपोज' नभए फिल्म चल्न गार्‍हो हुने हुँदा आफूले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको निर्देशक कमलकृष्णले बताएका थिए ।
आइटम नायिका सुष्मा कार्कीको पनि निर्देशकहरुसँगको सम्बन्ध मधुर रहँदैन । निर्देशक सुदर्शन थापासँगको प्रेम सम्बन्ध टुंगिएपछि उनीहरुबीच नायिका र निर्देशकबीचको सम्बन्ध समेत सधैंका लागि चुँडियो । त्यस्तै एक वर्षअघि 'वार' का निर्देशक मुकुन्द भट्टसँग विवाद भएपछि सुष्मा फिल्मबाटै आउट भइन् । सुष्माले निर्देशकले जबरजस्ती भल्गर सिन दिन भनेपछि फिल्म छोडेको बताएकी थिइन् भने भट्टले सुष्माले छायांकन स्थलमै ब्वाइप|mेन्डसँग अमर्यादित क्रियाकलाप गरेकोले निकालेको दाबी गरेका थिए ।
अर्की नायिका शोभिता सिम्खडा र निर्देशक बीबी फुयालबीच 'लास्ट किस' सिनेमामा सिनकै कारण विवाद बढेको थियो । स्विमिङ पुलमा किस सिन दिन लगाएपछि उनीहरुबीच विवाद झांगिएको थियो ।
त्यस्तै निर्देशक सुरज सुब्बाले नायिका हषिर्का श्रेष्ठलाई 'मेरो भ्यालेन्टाइन'बाट अचानक हटाएपछि उनीहरुबीच हालसम्म बोलचाल छैन । त्यस्तै नायिका अनु शाह र 'नागरिक' निर्देशक विमल पौडेलबीच पनि लफडा भएको थियो । सहमतिभन्दा बढी सिन र समय लिएको, पारिश्रमिक नदिएको आरोप अनुको थियो भने निर्देशकले नायिका अनुले गैरजिम्मेवार काम गरेको दाबी गरेको थियो ।
पर्दामा दुरुस्त देखिने कलाकारहरु पर्दापछाडिको खेलमा भने उत्तिकै पीडित हुने गरेका छन् । महिला कलाकारमात्रै होयन नायकहरु पनि निर्देशकहरुसँग विवादमा आउँछन् । यद्यपिा नायिकाको तुलनामा यस्तो विवादमा पर्ने नायकहरुको संख्या भने सानो छ । नायक सौगात मल्ललाई 'मेघा'बाट निकालिएको थियो । सौगातको समय नमिलेकोले निकालिएको बताइएपनि रेमनदास श्रेष्ठलाई ल्याउन त्यसो गरिएको थियो ।
kishor rajbhandari भन्नुहुन्छ:
Nepali Film Industry ra Actors...Character...Producers...Directors...Cinematographers...Script writers...Editors...Lyricists....Technicians lagayat sabai le...sabaibhanda pahile aaphu le...aaphno dhaeatal...aukat vujhnuparyo....fur sad payoki...kind aaphnai...sathi....sangi dauntary ra subhechhuk haruko kura katne....khutta tonne prabiti....laid tyagnu paryo.....positive thinking...attitude...action centered hunuparyo....sittaima aayeko...paayeko paisale film ta kohi kasaile banaundaina....sabailai thaha chha 50 barshma daudiraheko...Nepali Film Industry ma sabaiko aa ...aapjnai tita ...mitha...kathaabyatha....Kasai beta lukeko chhaina....jhur se...jhur script lekhdai nalekhnu hola...film ma lagani gardai nagarnu...Nirman...Nirdeshan....Chhayankan...Sampadan...Acting garera....amulya jeevan....samaya ra paisa bekkar ma naudaunu....bhaninchha Nepal ma matra ...hoina ...biswaka dherai rashtra haru jaha...n ka government ra audience haeule film arts...culture...laid euta ramro culture...sanskar...legacy ko rupma liyekochhaina ra film banaunu ra film ma lagani garnu bhaneko 95-99% lagani dubaunu ra casino ma gay era juwa gambling ma harnu jastai ho bhanne deshma hajjaraun....lakhaun le ....rojgari....udyamshilata payepani....ajhai....nakaratmak such ra kriya kalap haeuko Karen Lee hardaalikati bhyeko Reputation pani ...gumaunuparla bhanera sabai filmkarmiharu...nirmata...nirdeshak...kalakar haru sabai chanakho bhyera. Jasarri hunchha Nepali film industry...Nepali film arts and culture laid jgauna hat ma hat...kandh ma kandh...pailama Paila...maan ma maan milayera....nakaratmak kriya pratikriya harule bhanda saakaratmak kala karma ra asal ..file. Making ma sabai left unnati ra pragati garna lagnu parchha...last year 45-50 karod investment garera 105 bhanda bad hi film banyo muskil le...mantra 5-10 film harule matra....aaphno lagani uthauna success bhayo....taaipani...film ma invest garne film banane film khelne josh jangar bhandu Nepali film industry ko ujjwol vhavisyako sakaratmak lakshyan ho....2060-70 to 80 B.S. ajhhai Challenging jha taipani sabai....Investors...Producers...Directors....Cinematographers...Script writers....Edtore...Actors...Characters...technicians sabaila sukhad film nirman...ko lagi subha kamana....